साँझपख पोखरामा ड’रलाग्दो घ’टना, यसरी अनियन्त्रित भई खस्यो प्याराग्लाइडिङ, पाइलटको मृ’त्यु ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारसाँझपख पोखरामा ड’रलाग्दो घ’टना, यसरी अनियन्त्रित भई खस्यो प्याराग्लाइडिङ, पाइलटको मृ’त्यु !
November 25, 2020 admin समाचार 3530
यो खबर पूरा थाहा पाउन तल भिडीयोमा हेर्नु होला।
काठमाडौँ- नेपाल वायु सेवा निगमका लागि चिनियाँ जहाज उडान भर्न सुरु गरेको दिनबाटै निल्नु न ओकल्नु भयो । निगमको विकास र सेवा विस्तारका लागि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा खरिद गरिएका ६ वटा जहाज निगमले करिब ६ वर्ष चलाउँदा निरन्तर घाटा बेहोर्नुपर्‍यो। पाँच वर्षमा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा भएपछि निगमले चीनसँग अनुदानका २ र खरिदका ४ सहित ६ वटै चिनियाँ जहाजको उडान गत साउन १५ गतेदेखि सधैँका लागि बन्द गरे ती जहाज ग्राउन्डेड गर्‍यो । चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड भएको साढे तीन महिना बितेको छ।जहाज ग्राउन्डेड गर्दा पनि निगमलाई सुख छैन । निगमले ती जहाजको पार्किङ र इन्सुरेन्सबापत प्रतिमहिना १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्नु परेको छ । उडाए वा नउडाए पनि घाटा जहाज उडाउँदा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको निगमले थन्क्याउँदा पनि घाटा बेहोर्नु परेको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निगमले जहाज ग्राउन्डेड गरेको साढे तीन महिना बित्दा पनि जहाज व्यवस्थापनको टुङ्गो लागेको छैन । निगमका अनुसार चिनियाँ कम्पनीको एमए–६० जहाजको दैनिक पार्किङ शुल्क २ हजार ५१४ रुपैयाँ र इन्स्युरेन्सको एक हजार ६१ अमेरिकी डलर दैनिक तिर्नुपर्छ।
February 5, 2021 admin समाचार 1508
November 24, 2020 admin समाचार 2705
November 23, 2020 admin समाचार 4408
बधाई छ गोर्खाहरुले गौरवपूर्ण इतिहास बेलायती सेनामा क्याप्टेन बने पहिलो नेपाली युवती अंशु गुरुङ लण्डन । गोर्खाहरुले गौरवपूर्ण इतिहास स्थापित गरेको बेलायती सेनाको एक उच्च पदमा नेपाली युवतीले सम्भवतः पहिलोपटक भर्ती हुने सौभाग्य पाएकी छन्
Brody king On Why He Wouldn’t depart His full Time Job To signal With WWE (101494)